Sourdough Pancakes Kubva Kurasa - Sugar Geek Show - Kudya Kwemangwanani
Pies Uye Tarts
Sourdough Rasa Pancake Recipe
Ini ndinonyatsoda kugadzira aya evhuvira rasa mapancake. Ivo kuravira NZIRA zvirinani pane zvakajairika mapancake, havakusiye iwe uine iro rinorema kunzwa mudumbu rako uye unongotora maminetsi mashanu kuti uite! Iwo akareruka, akapfava uye inzira yakanaka yekushandisa kumusoro kweiyo yakasviba sosi kurasa! Kana uchida svutuguru yemucheka , iwe unenge uchinyatsoda kuyedza iyi recipe!
Pandakanga ndichikura, hatina kumbobvira takawana mapancakes. Isu taive nemapikelets. Ivo vakafanana chaizvo nemapancake asi kwete seanotapira. Zvakawanda senge yakabikwa bundu.
Handisati ndambofarira mapani. Ivo vanoita kuti ndinzwe kubhururuka uye ndiri KUNYENGA maawa mashoma gare gare.
Munguva pfupi yapfuura ndakafunga kudhizaina ndichigadzira svutuguru yemukaka kuitira kuti ndikwanise kugadzira chingwa changu chitsva kumba. Paunenge uchigadzira svutuguru yemusvutugadzike, ndakaona kuti iwe unoguma uine yakawanda yemavhiniga rasa (chikamu chaunorasa).
Ndisingade kutambisa hupfu hwakakosha, ndakatarisa kumusoro yakawanda yemasvidha rasa mabikirwo.
Uyu ANOSHAMISA. Ndakatadza kutenda kuti zvinonaka sei izvi mapundu mapundu mapundu! Zvinotoshamisa ndezvokuti havaravidze semukaka wemukaka zvachose, anongova manyawi, munonaka mapani. Asi izvi hazviite kuti unzwe kuzvimba.
unoita sei kuti uite keke nyoro
Pamwe nekuti sourdough ndeimwe yemhando dzakanakisa dzechingwa chaungadya . Sezvo mbiriso inopfuura nekuvira, inoputsa guten, zvichiita kuti zvive nyore kugaya uye kudzikisira kusagadzikana.
Chii chinonzi Sourdough Rasa?
Sourdough rasa ndicho chikamu chesavi yemukaka inotanga kuvhunwa nembiriso mushure mekupihwa chikafu nekurasa. Haisi chokwadi chekuti svutuguru inotanga chii? Tarisa uone yangu yakasviba sosi yekutanga recipe.
Protip - Unogona kusevha mbiriso yakasviba rasa uye woishandisa gare gare! Ingoimonera uye kuiisa mufiriji kwemazuva maviri. Chero yakareba kwenguva refu uye inotanga kukura yakawanda kwazvo uye inogona kuravira zvinovava.
Rasa mabikirwo inzira huru yekushandisa iyo kurasa pane kuirasa! Rasa kunogona kuve neyakasiyana nhanho yekuravira kwazviri zvichienderana nehuso hweyako yakasviba sosi yekutanga.
Nzira yekugadzira sei keke sitirobheri keke
Ndezvipi Zvinongedzo Iwe Zvaunoda Kune Sourdough Pancakes?
Zvese zvaunoda ndezvimwe zvekutanga zvigadzirwa kuti uite mukaka wakasviba rasa mapancake. Chikurukuru, iwe unoda kurasa! Ini ndinowanzove neka 1 kapu yekurasa asi iyo yaunowedzera haina kukosha chaizvo. Funga nezve kurasa se 'kuravira' kwepancake ako.
Nhanho 1 - Isa skillet yako (Ini ndinoda kushandisa yakakanda-simbi skillet kunyangwe browning) pachitofu uye ipise pane yepakati-pasi kupisa kwemaminetsi gumi nemashanu. Tiri kupfura temu ye300ºF yekubika mapancake.
Protip - Yakadzika uye inononoka zvirinani kune mapakekuki kuti uve nechokwadi chekanaka chegoridhe shava yeganda uye yakapfava uye ine hunyanzvi hwemukati.
Nhanho 2 - Sanganisa zvinhu zvako zvese mundiro imwe uye sanganisa kusvikira zvasanganiswa. Hapana kunetseka kana iri bundu.
Nhanho 3 - Sungunusa teaspoon yetireiri mu skillet. Butter inowedzera kumwe kunhuwirira kunonaka kune ako mapekekuki.
Nhanho 4 - Dururira inenge 1/2 mukombe we batter mu skillet uye bika kwemaminitsi mashanu kana kusvika makona epancake atanga kuoneka akaomeswa uye iwe unogona kuona mamwe maburi achiumba pamusoro.
maitiro ekugadzira french macaron nhanho nhanho
Nhanho 5 - Flip Pancake yako pamusoro uye ubikire imwe maminetsi matatu.
Nakidzwa! Ini ndinotsvedza yangu mune rimwe bata asi mwanasikana wangu Avalon anozvisarudzira yake nesinamoni neshuga. Zvakanakisa!
Sourdough Chingwa Recipe
Maitiro ekugadzira akareruka, akapfava, uye anonaka svutuguru mapakeke kubva pane yako rasa. Aya mapancake anouya pamwechete mune isingasvike maminetsi mashanu uye obhururuka kubva griddle mumba mangu! Nzira huru yekushandisa kurasa kwako uye kutanga zuva nechingwa chinonaka. Gadzirira Nguva:5 mins Nguva Yese:5 mins Makorori:226kcal
▢10 ounces hupfu hwechinangwa-chose inenge 2 makapu akapambwa uye akaenzana
▢1 mukombe sourdough rasa zvimwe kana zvishoma zvakanaka
▢1 teaspoon soda yekubikisa
▢piri mashupuni poda yekubheka
▢3 Tapira Shuga
▢14 ounces mukaka inenge 1 3/4 makapu
▢piri yakakura mazai
▢piri Tapira canola mafuta
▢1 teaspoon munyu
Preheat skillet yako pamusoro pepakati-pasi kupisa kwemaminitsi gumi nemashanu
Sungai zvese zvenyu zvinongedzo pamwechete mundiro uye sanganisa kusvikira zvabatanidzwa. Ichave hombe uye thats ok.
Sungunusa 1 tsp yebhotela muhotela yako inopisa
Wedzera nezve 1/2 mukombe webatter yako mupani uye bika kwemaminitsi mashanu kana kusvika kumagumo epanikake ako atanga kuoneka akaoma uye iwe wotanga kuona maburi pamusoro pepancake
Flip pancake yako uye gadzirira imwe maminitsi matatu
Shumira ipapo nekuwedzera yakanyunguduka mafuta uye manyuchi!
Yakaderera uye inononoka yakakwana kune mapekeki. Ini ndinoshandisa thermometer kutarisa iyo temp ye skillet yangu. Uri kupfura mazana matatu kana kungoisa temp yako kune yepakati-pasi
Usapfuura-sanganisa batter yako kana ichave yakaoma. Ingo sanganisa iyo kusvikira yabatana
Shandisa batter yako ipapo ipapo kune yakanakira mhedzisiro
Unogona kusevha mbiriso yakasviba rasa uye woishandisa gare gare! Ingoimonera uye kuiisa mufiriji kwemazuva maviri. Chero yakareba kwenguva refu uye inotanga kukura yakawanda kwazvo uye inogona kuravira zvinovava.
Kushumira:1Pancake|Makorori:226kcal(gumi neimwe%)|Carbohydrate:3. 4g(gumi neimwe%)|Mapuroteni:7g(14%)|Mafuta:7g(gumi neimwe%)|Mafuta Akaguta:pirig(10%)|Cholesterol:51mg(17%)|Sodium:468mg(makumi maviri%)|Potassium:222mg(6%)|Fiber:1g(4%)|Shuga:7g(8%)|Vhitamini A:148IU(3%)|Calcium:112mg(gumi neimwe%)|Iron:pirimg(gumi neimwe%)
maitiro ekuchengeta sitirobheri yakachena mufiriji
maitiro ekugadzira gummy bears recipe
how to pasteurize mazai asina thermometer